23 Fikrado Fikrado Fikrado Cadaan ah - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta ee 23 Caddaan Tartanka Cagaaran
Naqshadda sawir-gacmeedka cad waxay noqotaa maqaarka labaad ee dumarka. Marka aad aragto qof leh tattoo cajiib ah sida tan, waxaa lagugu qasbay inaad talaabo hore u qaadatid si aad u fahamtid sida suurtogalka ah ee naqshaduhu noqon karaan.
1. Nasiib darro xambaarsan rikoodhka madow ee naqshadda haweenka
2. Xargaha madow ee madaw ku dhaji garabka
Dumarku waxay jecel yihiin tattoo badan. Wajiga ugu habboon ee naqshadeynta, waa quruxda badan waxay noqotaa. Garbaha waa qayb ka mid ah jirka oo meeshii lagu dhajiyo tattoo badiyaa lagu soo dhaweeyo.
3. Qurux qurux badan oo caddaan ah oo lagu sawiray naqshadeynta laf-dhabarka
Ka feker sidii aad u heli laheyd #tattoo oo u dhiganta shakhsigaaga midab cad. Mararka qaarkood, dadku dhab ahaantii ma heli karaan naqshadda adiga oo aan si fiican u eegin. Si kastaba ha noqotee, quruxda lama wadaagi karo laakiin waa la muujin karaa.
4. Naqshad sameynta qafiska cad ee haweenka gacanta
Tixgeli sababaha aad ugu baahan tahay tattoo cad sida ugu horeysa. Markaad sidaa sameysid waad awoodi kartaa inaad lahaato wax weyn oo ah naqshad aad u aragto inaad doorbidid.
5. Fikradda naqshadaynta quruxda madoow ee gacanta gabar
6. Cabbirta maskaxda ee caleenta maskaxda naqshadda gacanta
7. Feker naqshadeedka cad ee naqshadda gacanta
Shakhsiyaadka waxaa loo qoraa sababo kala duwan ... qaar ka mid ah dumarka doonaya inay sameeyaan aragti waxay rabi lahaayeen inay sawiraan cadaan tafaasiisha ah oo siin doona gees marka ay timaado muuqaalka.
8. Raaxo gaaban oo muuqaal ah oo muraayad cad u eg oo loogu talagalay gabdhaha
Tattoo cad wuxuu noqon karaa mid gebi ahaanba iftiiminaya. Waxay kuu sheegi karaan meesha aad ka timid ama meesha aad u baahan tahay. Muhiimadda tattoo cad waxay ku dhejin kartaa habka aad u rabto.
9. Calaamad waji ah oo muraayad ah oo loogu talagalay gabdhaha
Tattoo dheere ah oo dheellitiran wuxuu noqday mid ka mid ah shaati-yada aad u isticmaali karto wejigaaga oo aad eegto kala duwan.
10. Maskaxda ugu fiican # cadeynta naqshadeynta jimicsiga ee gabdhaha
11. Aqoonsiga cad ee tattoo maskaxda naqshadda maqaarka madow
Saltoosyada noocaan ah ayaa loo jecel yahay sababtoo ah sida ay u eegayaan maqaarka. Haddii aad rabto in aad u eegto nooc kale oo tafaasiil ah nooca tattoo ah oo aad u fiican.
12.Cool Fikradda madada xiirta cad ee loogu talagalay gabdhaha
Badanaa, tattoos caddaanku waa isbeddel. Tani waa sababta ay dadku u isticmaali lahaayeen tattoo si ay u calaamadiyaan adduunkooda.
13. Fikradda naqshadeynta jilicsan ee garabka ubaxa casaanka ah
Arrintani waa isbeddel, waxayna kala duwantahay qaababka qurxinta ee kale, waxaadna u baahan tahay inaad xajisid sharaabkaaga sawir-gacmeedkaaga leh qaabka naqshadda aad maskaxda ku hayso.
14. Garbaha caserka madow ee madow ee tattoo maqaarka
Dumarku waxay jecel yihiin saamaynta ay ku leedahay jidhkooda taas oo ah sababta aad u hubinayso in aad leedahay qaabka qaboobaha.
15. Fikradda naqshadeynta naqshadda midab-cad ee tattoo
16. Beautiful quruxda muraayadaha madow waxay ka muuqatay naqshad jilicsan
17. Quruxda madow muraayad calaamad ah
18. Calaamada madadaalo ee jilicsan ee jilicsan
19. Fikirka naqshadda jilicsan ee casriga ah adigoo isticmaalaya madaw
20. Fikradda naqshadaynta qaabka quruxda badan leh ee la isticmaalayo isticmaalka White ink on gacanta
21. Jacaylka Nolosha - Aqoonsiga sawirka jimicsiga sawirka
22. Naqshad fudud oo tufaax ah oo cad cad
23. Fikirka naqshadeynta jumlada oo cad loo naqshadeeyey gacanta
sawirada gabdhahatattoo maroodigaTartoo ubax badantattoos qabaa'ilkatattoo tilmaantattoo dheemansawirada malaa'igtaTilmaamta jaalaha ahgadaal u laabotaraagada kubbaddasawir gacmeedtattoos qoortamuusikada muusikadatattoo ah octopuswaxay jecel yihiin tattoosshaatiinka shiidanlammaanahawaxaa la dhajiyay tattoostattoos iskutallaabtaJoomatari Tattoostattoos gacantagaraacista gacmahatattoos qorraxdalibto libaaxTattoos Wadnahashimbir shimbirtattoo indhahatattoos qosol lehtattoos saaxiib saxa ahtattoos cagtaTattoo Featherkoi kalluunkatattoo biyo ahtattoos ubaxtattoos eagleDhaqdhaqaaqanaqshadeynta mehndiTattoo infinityku dhaji tattoosjimicsiga bisadahatattoos moontattoos taajkiihenna tattootattoosfikradaha tattoolaabto laabtatattoos sleevearrow Tattoocalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahsawirrada ragga